Ebe n'agbata SPAM na Creepy Lgha Nghọta | Martech Zone
Izu uka ndi gara aga aburula onu meghe m anya banyere ihe ojoo ojoo nke akuko n’ozi oma. Ekwenyela m ọtụtụ ndị ọgbọ m na ụlọ ọrụ ahụ na mmeghachi omume ikpere ha na nzaghachi maka etu e si nweta data Facebook ma jiri ya maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge mkpọsa kachasị nso.
Historyfọdụ Akụkọ banyere Mgbasa Ozi Onye Ọchịchị na Data:
2008 - Enwere m mkparịta ụka dị ịtụnanya na onye injinia data sitere na mkpọsa mbụ nke President Obama bụ onye kesara otu ha si egbute ma zụta data. Isi ha siri ike, na Democratic Party agaghị ahapụ ndepụta ndị na-enye onyinye na ndị na-akwado ya (rue mgbe e meriri isi). Nsonaazụ bụ na mkpọsa ahụ kpochapụrụ, chịkọta, ma wuo otu ụlọ nkwakọba ihe data dị ịtụnanya na akụkọ ntolite. Ọ dị mma nke na ịchebe gbadara agbata obi. Ojiji nke data, tinyere Facebook, abụghị ihe na-adịchaghị mma - ọ bụkwa isi ihe dị na mmeri nke isi.
2012 - Facebook na-arụ ọrụ ozugbo na mkpọsa President Obama na, ọ na-egosi na data leveraged karịrị onye ọ bụla na-atụ anya ka weputa votu na aka na-emeri ndị President a abụọ ntuli aka.
2018 - Site na onye nkocha, Cambridge Analytica abụrụla ụlọ ọrụ jiri ikike data Facebook mee ihe iji jikọta oke data.
Ugbu a, a ga-agwa eziokwu, mkpọsa abụọ mbụ nwere ike ịhazi na Facebook (ọbụlagodi na etiti dị n'etiti mkpọsa ahụ na ndị otu Facebook). Abụghị m onye ọka iwu, mana ọ na-enyo enyo ma ndị ọrụ Facebook ekwenyela ụdị ojiji data a site na usoro Facebook. Na mkpọsa nke President Trump, o doro anya na a na-erigbu ọdịiche ahụ, mana a ka nwere ajụjụ nke ma etinyere iwu ọ bụla.
Igodo nke ụfọdụ n'ime nke a bụ na ebe ndị ọrụ nwere ike isonye na ngwà ma nye ikike iji nweta data ha, ewepụtara data ndị enyi ha n'ịntanetị. Na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị ihe ọhụrụ na ndị nwere echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị yiri onwe ha na-agbakọta ọnụ na ntanetị… ya mere data a bụ ezigbo ọla edo.
Nke a abụghị ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị - nke dị anya na ya. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ ebe data adịla oke egwu na mkpọsa. Enwere ebumnuche abụọ maka ụdị mkpọsa a:
Ndị Ntuli Aka na-enweghị Mmasị - ime ka ndị enyi na ndị enyi nwee ike ịgba ndị ntuli aka enweghị mmasị aka igosi na ịtụ vootu bụ usoro bụ isi nke mkpọsa ndị a.
Ndị ntuli aka na-akwadoghị - ndị ntuli aka a na-atụghị anya na-adaberekarị n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, yabụ ịnweta ozi ziri ezi n'ihu ha n'oge kwesịrị ekwesị dị oke egwu.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ma ndị ntuli aka ndị a bụ pasent dị oke. Imirikiti n'ime anyị maara ụzọ anyị ga-esi votu ogologo oge tupu ntuli aka ọ bụla. Igodo nke mkpọsa ndị a bụ ịchọpụta agbụrụ ndị dị na mpaghara ebe enwere ohere iji merie, na ịgafe ngalaba abụọ ahụ dị ka o kwere mee na ihe omume ị nwere ike ịkwali ma gbanwee votu ha. National ọzọ adịghị ọbụna na-egosi na ọnọdụ ebe ha nwere obi ike na ha na-aga iji merie ma ọ bụ ida… ọ bụ siwing-ekwu na ha lekwasịrị anya.
Site na ntuli aka ọhụụ a dị nkewa, ọ bụghị ihe ịtụnanya na a na-egwupụta usoro ma na-enyocha nke a. Mana m na-ajụ oke iwe nke ndị na-awakpo usoro a na ihe ndị jidere. Onye ọ bụla maara banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aghọta etu data siri ike. Ndị niile metụtara maara ihe ha na-eme.
Ọdịnihu nke Data Data na Nzuzo
Ndị ahịa (na, na nke a ndị ntuli aka) chọrọ ka ụlọ ọrụ (ma ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị) ghọta ha n'onwe ha. Ndị mmadụ na-eleda ọnụ ọgụgụ nke spam na ọkọlọtọ mgbasa ozi. Anyị na-akpọ mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-adịghị akwụsị akwụsị nke na-eju anya n'abalị anyị na-eduga na mkpọsa.
Ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie ka a ghọta ma gwa ha ozugbo. Anyị maara nke a - mkpọsa ahaziri iche na ọrụ ezubere iche maka akaụntụ. Obi abụọ adịghị ya na ọ na-arụ ọrụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ na onye nwere nkwenkwe abụọ nwere mmetụta ekpe wee zute mgbasa ozi na-akwado ya nke ha kwenyere, ọ ga-amasị ya ma kesaa ya. N'otu aka ahụ onye na-adabaghị adaba.
Otú ọ dị, ugbu a ndị na-azụ ahịa na-alụ ọgụ. Ha kpọrọ mmegbu nke ntụkwasị obi ha nyere Facebook (na nyiwe ndị ọzọ) asị. Ha na-elelị nchịkọta nke omume niile ha na-ewere na ịntanetị. Dịka onye na-azụ ahịa, nke a bụ nsogbu. Kedu ka anyị ga - esi debe ozi ma hazie ya nke ọma n’amaghị gị? Anyị chọrọ data gị, anyị kwesịrị ịghọta omume gị, yana mkpa ka anyị mata ma ị bụ atụmanya. Think chere na ọ bụ ihe na-atụ ụjọ… mana ihe ọzọ bụ na anyị na-emejọ mmadụ niile.
Nke a bụ ihe na-eme n'ihe gbasara Google (onye na-ezobe data nke ndị ọrụ edebanyere aha) ma nwee ike ịbụ ihe na-eme na Facebook, bụ ndị kwupụtagoro na-akwadoghị na ịnweta data ga-amachibido. Nsogbu a na-agbasawanye karịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ezie. Kwa ụbọchị m na-enweta ọtụtụ narị kọntaktị site n'aka ndị zụrụ data m na-enweghị ikike m - na enweghị m nkwụghachi.
N'etiti Spam na Creepy bụ nghọta
N'uche m dị umeala n'obi, ekwenyere m na ọ bụrụ na ndị guzobere mba a mara na data ga-aba oke uru, ha gaara agbakwunye mmezi na Bill of Rights ebe anyị nwere data anyị na onye ọ bụla chọrọ ime ya chọrọ nkwupụta ikike karịa na-ewe ya n’amaghi ama.
Ka anyị chee ya ihu, na nkwụsị maka ụzọ mkpirisi iji zube ma nweta ndị na-azụ ahịa (na ndị ntuli aka), anyị maara na anyị na-ama jijiji. Ihe azu azu bu anyi kpatara. Enwere ike ịmetụta mmetụta ya ruo ọtụtụ afọ n'ihu.
Ekwetaghị m na akala iji dozie nsogbu ahụ, n'agbanyeghị. Otu ngwọta ga-edozi ihe a niile - nghọta. Ekwetaghị m na ndị na-azụ ahịa na-ewe iwe n'ezie n'ihi na ha na-eji data eme ihe… Echere m na ha na-ewe iwe n'ihi na ha amaghịdị na a na-egbute ya ma jiri ya. Ọ dịghị onye na-eche na ị na-ewere ajụjụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Facebook na-ahapụ data ha na ndị ọzọ iji zụta ma lekwasị anya maka mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba. Ọ bụrụ na ha mere, ha agaraghị adị mma mgbe ọ gwara ha ka ha kee data ha.
Gịnị ma ọ bụrụ na mgbasa ozi ọ bụla nyere nghọta na ihe mere anyị ji ele ya anya? Ọ bụrụ na email ọ bụla nyere nghọta banyere otu anyị si nweta ya? Ọ bụrụ na anyị gwara ndị na-azụ ahịa ihe kpatara anyị ji eji ozi akọwapụtara agwa ha okwu n'otu oge, enwere m nchekwube na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ga-emeghe ya. Ọ ga-achọ ka anyị kụzie atụmanya ma mee ka usoro niile anyị nwee nghọta.
Enweghị m nchekwube na nke ahụ ga-eme. Kedu nke nwere ike ibute n’ọtụtụ spam, ọzọ na-akpụ akpụ the rue mgbe a ga-achịkwa ụlọ ọrụ ahụ. Anyị ejirila ụfọdụ n'ime ihe ndị a meebu Ezipụla Ozi na Kpọọ anatara.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na enwere otu nnwere onwe na njikwa njikwa ndị ahụ… ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Tags: nchịkọta cambridgedata ahiana-akpụ akpụdatantuli aka datantuli akaFacebookObamantuli aka obamanzuzospamezubere ichenghọtaopiụda nhoputa